Tranoben’ny kolontsaina sy serasera: mitentina 1 miliara Ar ny tetibidin’ny ao Fianarantsoa | NewsMada
Tranoben’ny kolontsaina sy serasera: mitentina 1 miliara Ar ny tetibidin’ny ao Fianarantsoa
Foto-drafitrasa ho an’ny kolontsaina sy ny serasera isam-paritra. Ao anatin’ny hazakazaka amin’ny asa voafaritra hotontosainy ny minisitera. Anisany ny Tranobe manara-penitra hatsangana ao Fianarantsoa.
Hovitaina haingana sady hovitaina tsara. Taorian’ny tany Antsiranana, tontosa omaly koa ny fametrahana ny vato fototra, ho an’ny Tranoben’ny kolontsaina sy ny serasera ao amin’ny faritra Matsiatra Ambony. Teo amin’ilay toerana efa nisy fanarenena tsy vita hatramin’ny farany, nandritra ny taona maro no hanaovana ity foto-drafitrasa vaovao ao Ambatomena Fianarantsoa ity.
« Mitentina 1 miliara Ar ny tetibidin’ny fanarenana ny Tranoben’ny kolontsaina sy ny serasera. Hanomboka tsy ho ela ny asa, ary ho vita ny volana desambra izany. Manomboka ny volana janoary kosa ny fampitaovana azy”, hoy ny fampanantenana nomen’ny minisitry ny kolontsaina sy ny serasera, Andriatongarivo Rakotondrazafy Lalatiana, nandritra ny lanonana nametrahanany vato fototra, omaly.
Trano lehibe misy rihana, eo amin’ny velaran-tany mirefy 1.000 m² ity hatsangana ity. Ho trano fanaovana fampisehoana manara-penitra, mahazaka mpijery miisa 550 mipetraka ny ao ambany. Hisy koa toerana fanaovana fampirantiana isan-karazany sy tranomboky. Ao amin’ny rihana kosa ny toerana ho an’ireo mpanao gazety mitrandraka sy mampita vaovao. Hisy koa ny efitrano fanaovana vela-kevitra, ankoatra ireo birao fiasan’ny tompon’andraikitra.